David Bowie wuxuu sii wadaa inuu dhiirigaliyo muuqaalkiisa | Abuurista khadka tooska ah
Jose Angel | | Fanaaniin, General, Dhiirrigelinta
Haddii uu jiro fanaan u qalma ictiraaf muddo kadib. Booska maqaalka bogagga maqaalka. Naqshadaha xusuusta xusuustaada. Muusikada ayaa lagu dhajiyay qof kasta oo hadlaya muddo dheer, taasi waa David Bowie.
Ahaanshaha safka hore ee muusikada muddo dheer, dhimashadiisii ​​sannad ka hor waxay dib u soo nooleysay muusigiisii ​​iyo shaqsiyan. Fanaaniinta aduunka oo idil waxay joojiyeen shaqadooda shaqsiyadeed si ay ugu hibeeyaan boos sawirkooda.
Oo halkan waxaan ku barnaa dhowr maqaal habka loo dabaaldego fanaaniinta qaar magacaaga. Oo markan waxay ku timaaddaa qaab shaambado, haa, shaambado. Caadi ahaan aaladdan waxaa loo adeegsadaa dirista, laakiin waxaan u maleynayaa in kuwani aysan sahlaneyn in warqad lagu dhejiyo oo la sii daayo.
Royal Mail waxay sameysaa markii ugu horeysay
Shirkadda Royal Mail ee ka socota Great Britain ayaa u hibeysay orod ka kooban toban shaabadood oo sida ay sheegeen noqon doonta markii ugu horreysay ee ay sii daayaan orod hal farshaxan. Sida laga soo xigtay iyaga "Muddo shan sano ah, David Bowie wuxuu safka hore kaga jiray dhaqanka casriga ah, wuxuuna saameyn ku yeeshay jiilalka isdaba jooga ee muusikiistayaasha, farshaxanada, naqshadeeyayaasha iyo qorayaasha"
Shaababyadan waxaa ka mid ah sawirrada Bowie oo ku jira xafladdii 1973 ee 'Ziggy Stardust tour', hillaac badeed caan ah oo zig zag ah, 'Heroes' oo daboolaya iwm. Kuwa kale ee aad ka arki karto boggooda internetka. Dhammaadka 'Blackstar' LP oo la sii daayay dhimashadiisa ka hor.
Tani waa sida ay weli ugu sii jirto xusuusta dad badan iyo iyada oo aan loo noqon wax ka yar. Laakiin tan waa inaan waxyar sugno. Waana in wadarta istaambiyadu ay soo bixi doonto laga bilaabo Maarso 14 ee sanadkan. Qiimo lagu qiyaasay € 8 -6,48 rodol- laga bilaabo Halkan. Taas oo aan u xumayn daabicitaan kooban.
Aabbahay aad buu u jeclaa muusiggiisa, laga yaabee inay hadiyad fiican u tahay isaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » David Bowie wuxuu sii wadaa inuu dhiirigaliyo muuqaalkiisa